तिथि मेरो पत्रु » शब्द बिना तपाईंको प्रेम व्यक्त
तिनीहरूले यसो चरम सबै भन्दा राम्रो यो भने, “शब्दहरू भन्दा बढी तपाईं यो वास्तविक बनाउन के गर्न सबै छ. त्यसपछि के तपाईं मलाई प्रेम भन्ने छैन हुनेछ. म पहिले देखि नै थाहा चाहन्छु किनकी।” यो '80 का देखि आफ्नो विशाल हिट मा, शब्द भन्दा बढी. अनि त्यो हामी सबै को लागि आशा छ कि अन्तिम जस्तै छ. तपाईं एक उपकरण रूपमा शब्दहरू प्रयोग आवश्यकता छैन जो महसुस कसरी एक व्यक्ति देखाउन थुप्रै तरिकाहरू छ. यहाँ तपाईं महसुस ठ्याक्कै कसरी विशेष व्यक्ति बताउन पाँच तरिका छ:
ठीक, यति प्रौद्योगिकी यो गीत शब्द हो किनभने एक मामूली धोखा छलफल तर यो बोलेको शब्द छैन सकिन्छ. ब्रायन एडम्स सहित देखि चयन गर्न थुप्रै सुन्दर गीतहरू छ’ स्वर्ग, तपाईंले पठाउन खोज्नुभएको हो सन्देश निर्भर फुट समय र Alanis Morissette प्रधान पछि Cyndi Lauper समय. बस रेकर्ड मा छडी वा तपाईं एक गायक वा / र संगीतकार हुनुहुन्छ भने किन आफ्नो प्रेमी serenading मा यो एक जाना दिन छैन? यो एक अधिक व्यक्तिगत स्पर्श भन्छन्.
फूल & उपहार
फूल वास्तवमा यो भन्दै बिना आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्न ठूलो तरिका हो. त्यसैले तपाईं आफ्नो प्रेम मनपर्ने फूल थाहा सुनिश्चित र त्यहाँ जान. या वैकल्पिक तिनीहरूले अत्तर / आफ्टरशेव जस्तै परम्परागत फूल मा छैनन् भने तिनीहरूले जस्तै केहि लागि जाने, बनाउन-अप, पुस्तकहरू, डीभिडी, आदि … तपाईंले तिनीहरूलाई सुन्न किनभने एक व्यक्ति आफ्नो प्रेम देखाउँछ उनि रुचि के थाहा भनेर देखाउँदै र उनीहरूले जस्तै के सम्झना. तिनीहरूले केही भन्न छैन भने पनि मान्छे यी कुराहरू सूचना.
तिनीहरूलाई टाढाको नियन्त्रण नियन्त्रण अनुमति
सबै समय यो लिने सट्टा टाढाको नियन्त्रण आफ्नो प्रेम नियन्त्रण दिनु तपाईं पनि तिनीहरूलाई प्रेम देखाउने एक मिठाई र सूक्ष्म तरिका हो. आखिर, आफ्नो मनपर्ने शो परित्याग गर्न यो प्रेम भएको छ, होइन?!
तपाईं बनाउन रचनात्मक हो भने आफ्नो प्रेम लागि एक रोमान्टिक तस्वीर एक साँच्चै रोमान्टिक विचार हुन सक्छ. अथवा अर्को राम्रो विचार आफ्नो जीवन प्रेम प्रस्तुत गर्न तपाईं तैयार दुवै एक तस्वीर रही छ.
संग मा सार्नुहोस् / तिनीहरूलाई विवाह
खैर तिनीहरूलाई सुम्पिदिनुभयो भन्दा कसैले लागि आफ्नो प्रेम देखाउने असल उपाय हो! तपाईं तयार हुनुहुन्छ र भने उनीहरूले पनि हुन सक्छ विचार, तपाईँ के पर्खिरहेका छन्?!
यो5महिला बनाउने बिग डेटिङ गल्तिहरु